Spakka Lotto: barnaamij bilaash ah oo lagu guuleysto badan!
Runtii ma waxaad dooneysaa inaad isku daydo midkood ku guuleysta ciyaarta Lotto? Degso softiweerkan bilaashka ah hadda ThatsLuck!
Kahor intaadan sii wadin xusuusnow taas ThatsLuck sidoo kale waxaad ka heli kartaa waxyaabo bilaash ah, haddii aad rabto inaad cusbooneysiiso qoraalada iska qor kanaalkayaga on YouTube.
Ciyaartii Lotto Waxaan ciyaari lahaa haa iyo maya qiyaastii labaatan jeer noloshayda, runti waligay ima soo jiidin intaas in le'eg, laga yaabee maxaa yeelay marwalba waxaan u maleynayay in haddii horeyba loola dagaallamayay 37 lambar (kuwa Roulette) ay ahayd mid la yaab leh, iskaba daa 90 , intaa waxaa sii dheer ma bixin si xun, laakiin aad u xun!
Ok kani ma aha boostada in lagu aado faahfaahinta farsamo ee intee le'eg ayuu Talyaanigu ciqaabay taageerayaasha kulankaan qadiimiga ah qarniyo, si kastaba ha noqotee waxaa lagu caddeeyey xisaabta oo ka mid ah isku dhafka kala duwan ee uu heli karo ciyaaryahanka,ambo xaqiiqdii waa mid ka mid ah kuwa ugu yar ee aan dhib badnayn.
Aniga oo ka bilaabaya xaqiiqadan, waxaan abuuray koronto dhaliyaha wanaagsan ee jawiga kaas oo, aniga xitaa si adag ayaan u rumaysan karaa (nasiib darose ma haynin caddaynta), wakhti hore waxaan ku guuleystay 625 euro, anigoo ku garaacaya labada qalalan shaagagga Naples.
Waxaan sidoo kale xasuustaa in qayb wanaagsan oo ka mid ah lacagtaas, oo si deg deg ah loogu talagalay madadaalo kale, waxaan naftayda siiyay usbuuc dhammaad ah magaalada quruxda badan ee Naples.
Sida loo tijaabiyo nasiibkaaga inaad labadaba guuleysato
Si aad u isticmaasho Spakka Lotto uma baahnid sharaxaad badan, kaliya: 1. bilaw barnaamijka, 2. dhagsii badhanka Start, 3. dhaqaaji xawaaraha kala duwanaanshaha haddii aad rabto iyo 4. riix batoonka Jooji.
Spakka Lotto waxay si tartiib tartiib ah u bilaabi doontaa inay gaabiso, illaa ay aakhirka istaagto oo ay muujiso labada lambar iyo giraangirta aad ku tijaabineyso nasiibkaaga labadaba.
Baahnayn in la sheego, haddii aad runtii rabto inaad isku daydo nasiibkaaga inaad ku guuleysato labadaba ciyaarta Lotto Waxaan kugula talinayaa inaad had iyo jeer qoondayso runtii arrin yar iyadoo la raacayo 2/3 euro ciyaar kasta, ciyaarta of Lotto, haddii ay runti adiga ku qanacsan tahay, waa inay ahaataa waqti lagu raaxeysto oo loo qoondeeyo qaddar yar oo dhab ah inta lagu jiro sanadka.
Haddii aad weli rabto inaad tijaabiso, sidoo kale maxaa yeelay sida TV-ga halkan ku yaal Talyaanigu leeyahay "... haddii aadan ciyaarin ma guuleysatid", Spakka Lotto hubaal waxay kaa qaadi doontaa ceebaynta xulashada lambarrada si aad tikidhada u calaamadeyso Lotto marka saaxiibayaal, cadaabta xisaabta iyo Nasiib wacan!
Soo Degso Fayl	Spakkalotto.zip - 1 MB
Categorie Lotteries Mawduuca marinta